Football Khabar » सुपर कपमा सेमिफाइनल : आज बार्सिलोना र रियल सोसिडाड भिड्दै
सुपर कपमा सेमिफाइनल : आज बार्सिलोना र रियल सोसिडाड भिड्दै
स्पेनिस सुपर कप फुटबल प्रतियोगितामा आजदेखि सेमिफाइनलका खेल सुरु हुँदैछन् । गत सिजनदेखि सुपर कपमा पनि चार टिमलाई खेलाउन थालिएको छ । गत सिजन सुपर कप रियल मड्रिडले जितेको थियो । यसपटक पनि चार टोलीले नै उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
आज पहिलो सेमिफाइनल खेलमा शीर्ष लिग ला लिगाका दुई टोली रियल सोसिडाड र बार्सिलोना आमनेसामने हुँदैछन् । यो खेल कार्डोबा सहरस्थित फुटबल क्लब कोर्डोबा क्लबको घरेलु रंगशालामा हुँदैछ । खेल नेपाली समयअनुसार राति ठीक १ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
आजको खेलको विजेता टोली फाइनल पुग्ने पहिलो टिम बन्नेछ । एक खेलबाटै फाइनलको टुंगो लाग्ने हुनाले सोसिडाड र बार्सिलोना दुवै यस खेलमा जितको दबाबमा हुनेछ । यस खेलको विजेता टिमले रियल मड्रिड र एथ्लेटिक बिल्बाओबीच हुने दोस्रो सेमिफाइनलको विजेतासँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
बार्सिलोना र सोसिडाडबीच अन्तिम खेल केही समयअघि डिसेम्बर १७ तारिखमा ला लिगामा भएको थियो, जहाँ बार्सिलोनाले आफ्नो घरमा सोसिडाडलाई २–१ ले हराएको थियो । त्यसपछि यी दुई टोली आज राति पुनः सुपर कपमा भिड्न लागेका हुन् । आज रातिको खेलमा बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सीसहितका खेलाडी उत्रिनेछन् । यसअघि ला लिगामा ग्रानाडाविरुद्धको खेल दौरान दोस्रो हाफमा तिघ्राको मांशपेसीमा समस्या भएपछि मेस्सी सब्सिच्युट भएकाले आज उनले सुरुआतबाटै खेल्नेमा शंका छ ।
यता, सोसिडाडको टोलीमा पनि प्ले मेकर डेभिड सिल्भा आजको खेलमा उपलब्ध हुनेछन् । आजको खेलमा सोसिडाडका सबैजसो प्रमुख खेलाडी उपलब्ध छन् । ला लिगाको हाल अंक तालिकामा बार्सिलोना १८ खेलपछि ३४ अंकहित तेस्रो स्थानमा छ भने सोसिडाड १९ खेलपछि ३० अंकसहित पाँचौं स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति २९ पुष २०७७, बुधबार १२:०१
रोनाल्डो र डिबालामा कसले पहिला पूरा गर्ला शतक ?
‘ठूला खेल’मा बार्सिलोनाको ‘कन्तबिजोग’ : यो सिजन यतिसम्मको खराब तथ्यांक
नरोकिने वेगमा रहेका लेवान्डोस्की ५० गोल नजिक : अब कति टाढा ?
सिरी ए : आज युभेन्टस र एसी मिलानको रोमाञ्चक भिडन्त हुँदै
आज रियल मड्रिड र सेभिल्ला भिड्दै : रियललाई शीर्ष स्थानमा उक्लिने सुनौलो मौका
बार्यन म्युनिखले जित्यो लगातार नवौं सिजन बुन्डेसलिगा उपाधि
चेल्सीद्वारा ‘उपाधि सेलिब्रेसन गर्न ठिक्क परेको’ सिटीको उसकै घरमा रामधुलाइ !
नेइमार बार्सिलोना फर्किने च्याप्टर बन्द : पिएसजीसँग गरे नयाँ सम्झौता
यस्तो आयो बार्सिलोना र एथ्लेटिको मड्रिडको प्लेइङ–११